Antoky ny fahamarinan-toeran’ny mpitondra voafidy, hoy ny avy eo anivon’ny CENI, ny fahamaroan’ireo tanora mandeha mifidy.
Mitohy manohy ny fanabeazana ara-pifidianany sy ny fanentanany hifidy hatrany moa ity rafitra ity na dia mandeha aza ny tsikera sy kiana samihafa.
Ry zareo avy eo anivon’ny tolon’ireo kandida 22 kosa dia nitanin’andro tery amin’ny HCC Ambohidahy tery tamin’iny omaly iny. Azo lazaina ho naman’ny mitady gisa mainty ihany moa izy 22 mianadahy ireto rehefa jerena ny fihetsiky ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana sy ny vaomiera misahana ny fifidianana na ny CENI satria ireto farany dia efa nanizingizina fa tsy afaka hamaly ny fitakian’izy ireo intsony.
Mitohivakana ao amin’ny tambajotra sosialy ao amin’izao fotoana izao ary efa hatry ny omaly ny hafatra kely isan-karazany, na raiki-pohy io na raki-tsary, ho fanohanana ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra izay hiatrika ny lalao mandroso hiadiana ny amboaran’i Afrika any Guinée équatorial anio. Samy manantena vokatra tsara ireo mpankafy satria hita ho miakatra hatrany ny fahavononan’ny Barea.